Darpan Nepal – आज २०७५ साल साउन ८ गते मंगलबार, तदअनुसार जुलाई २४, २०१८ – हेर्नुस आजको राशिफल
आज २०७५ साल साउन ८ गते मंगलबार, तदअनुसार जुलाई २४, २०१८ – हेर्नुस आजको राशिफल
Jul 24, 2018darpan networkReligion/Rashifal0Like
वि.सं. २०७५ साल साउन ८ गते। मंगलबार। इश्वी सन् २०१८ जुलाई २४ तारिख। नेपाल संवत् ११३८ दिल्लाथ्व। आषाढ शुक्लपक्ष। तिथि– द्वादशी, १९:१८ बजेउप्रान्त त्रयोदशी। आज २०७५ साल साउन ८ गते मंगलबार, तदअनुसार जुलाई २४, २०१८ – हेर्नुस आजको राशिफल
पुरुषार्थले समाजमा स्थापित बनाउन सक्छ। रोकिएका काम बन्नाले मनग्गे लाभ हुनेछ। चुनौती पन्छाएर काम बनाउन सकिनेछ। प्रतिस्पर्धा, विवाद तथा मुद्दाहरूमा आफ्नो पक्ष बलियो रहनेछ। भविष्यका लागि विशेष काममा जग बसाउने मौका छ। साँझतिर प्रियजनसँग रमाइलो भेटघाट हुनेछ। काममा केही विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
हिस्सेदारसँग असमझदारी बढ्नाले पहिलेको सम्झौता भंग हुन सक्छ। बलजफ्ती गर्दा काम बिग्रन सक्छ। स्थायी सम्पत्तिमा पनि विवाद आउन सक्छ। अनावश्यक साइनो गाँस्नेहरूसँग सावधान रहनुहोला। नयाँ योजना प्रारम्भ गर्न उपयुक्त साइत पर्खनुपर्ला। साँझदेखि स्थितिमा सुधार आउनाले रोकिएको काम बन्नेछ र अध्ययनमा पनि प्रगति हुनेछ।
दाजुभाइमा आत्मीयता बढ्नेछ भने प्रेम र मित्रताको बन्धनसमेत कसिलो हुनेछ। लगानी गर्दा व्यवसायमा मनग्गे धनलाभ हुनेछ। मिहिनेतले दिगो फाइदा दिलाउन सक्छ। पहिलेका प्रतिस्पर्धीहरू सहयोगीका रूपमा देखा पर्नेछन्। साँझतिर साथीभाइमा असमझदारी बढ्नाले लक्ष्यमा पुग्न समस्या पर्नेछ। आफन्तजनको विश्वास पनि गुम्न सक्छ।
काममा राम्रो सुरुवात हुनेछ। पहिलेको सफलताले थप हौसला जगाउनेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने सहयोगीहरू प्रशस्तै भेटिनेछन्। रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द प्राप्त हुनेछ। बिछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ। आलोचकहरूलाई व्यवहारले समेट्ने प्रयास गर्नुहोला। साँझतिर लगनशीलताले मात्र संकल्प पूरा हुनेछ।
काम बन्नाले राम्रै लाभांश लिने अवसर प्राप्त हुनेछ। तर काम सम्पादन भए पनि तत्काल आम्दानीको आशा नराख्नुहोला। शुभचिन्तकहरूको सुझावलाई बेवास्ता गर्दा दु:ख पाइनेछ। आकस्मिक खर्चले अर्थ अभाव देखापर्न सक्छ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ। साँझतिर शुभचिन्तकहरू टाढिन सक्छन्। मिहिनेतको प्रतिफल जोगाउन अलि चनाखो रहनुहोला।
चिताएको काम छिटै सम्पादन हुनेछ। सहयोगीहरूले हिम्मत दिलाउनेछन्। व्यापारमा पनि प्रशस्त फाइदा हुनेछ। आफ्नो क्षेत्रमा राम्रै प्रभाव जमाउन सकिनेछ। दाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। सामाजिक दायित्व बढ्नेछ। भूमि, वाहन र पैत्रिक सम्पत्तिबाट लाभ मिल्नेछ। कीर्तिमानी काम गर्ने समय छ। साँझतिर आम्दानी बढ्नेछ र विशेष लाभ हुनेछ।
Previous Postआज मंगलबार को दिन भुलेर पनि गर्न नहुने पाँच काम…. Next Postदेशको राजधानीका सडकहरुको हालत: राजधानीलाई गिज्याइरहेका छन्।